कस्तो छ १६० सिसीको अप्रिलिया स्कुटर? (भिडिओ रिभ्यु) :: Setopati
कस्तो छ १६० सिसीको अप्रिलिया स्कुटर? (भिडिओ रिभ्यु)
पछिल्लो समय अप्रिलिया स्कुटरले युवा पुस्तालाई लोभ्याएको छ। यसको आकर्षक लुक्स, इन्जिन क्षमता लगायत विशेषताले धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको देखिन्छ। अप्रिलिया स्कुटर मोडलअनुसार १२५ सिसीदेखि उपलब्ध छ।
विभिन्न मोडलमध्ये यहाँ हामीले अप्रिलिया एसआरएक्स-१६० बारे चर्चा गरेका छौं। यो १६० सिसी इन्जिन क्षमता भएको म्याक्सी स्कुटर हो।
केही महिनाअघि दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्सले यो स्कुटर बजार भित्र्याएको हो। छोटो समयमै एसएक्सआर-१६० ले राम्रो चर्चा अनि बजार पाएको कम्पनी बताउँछ।
अप्रिलिया एसएक्सआर-१६० म्याक्सी डिजाइनको स्कुटर हो। अर्थात् इन्जिन क्षमता राम्रो हुनुका साथै लामो दुरीको यात्रा गर्न सजिलो, धेरै फिचर भएको स्कुटर।
एसएक्सआर-१६० को आवरण कुरा गर्दा यसको फिनिसिङ निकै शानदार देखिन्छ। सार्प बडी लाइन, स्पोर्टी बम्पर्स र हाइ क्राफ्टम्यानसिपले यसको लुक्स प्रिमियम बनाएको कम्पनीको भनाइ छ।
स्कुटरको अगाडि भागमा एलइडी टेक्नोलोजीको ट्विन क्रिस्टल हेडलाइट छ। यसको बीच भागमा बिम लाइट पनि छ। चलाउनेलाई सहज मात्र नभइ देख्नेलाई पनि अप्रिलिया एसएक्सआर-१६० कुल लाग्न सक्छ।
कम्फर्ट र कन्भिनियन्सः
स्कुटरको अघिल्लो भागमा भएको इन्टिग्रेटेड डार्क फ्लाइ स्क्रिनले चालकलाई धूलो र हावाबाट जोगाउँछ।
यो स्कुटर ह्यान्डल गर्न पनि सजिलो छ। स्कुटर जम्मा १९६० एमएम अग्लो छ भने यसको ह्वीलबेस १३५३ एमएमको छ। यसको चौडाइ ८ सय ०३ एमएम र उचाइ १ हजार २ सय ०५ एमएमको छ। स्कुटरको सिट उचाइ भने ७ सय ७५ एमएमको छ। ५ फिटभन्दा बढी उचाइ भएकाले सजिलै चलाउन सक्छन्।
यसमा भएको डुअल टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन र एड्जस्टेबल रियर सस्पेन्सनले स्मुथ राइडको अनुभव दिन्छ। यसको रियर सस्पेन्सनलाई चालकले चाहेजसरी पछि एडजस्ट गर्न सक्छन्।
चलाउने र पछाडि बस्नेलाई सहज हुने हिसाबले फुट पेग राखिएको छ।
चालकमध्ये धेरैले स्कुटर चलाउँदा ह्यान्डलमा पसिना हुने गर्छ। तर अप्रिलिया एसएक्सआर १६० मा भएको ह्यान्डल ग्रिपले चालकको हातमा चिपचिप पसिना महसुस गराउँदैन।
स्कुटरमा २१ लिटरको डिकी छ। कतै टाढाको यात्रा गर्नुछ भने आफूलाई चाहिने अनिवार्य सामग्री यसमा आरामले अटाउन सकिन्छ। यसमा डिजिटल स्पिडोपिटरका साथै मोबाइल कनेक्टिभिटी पाउन सक्छौं। स्कुटरको कुल तौल १२९ केजीको छ।
एसएक्सआर-१६० मा भएको १६० सिसी, ३ भल्भ फ्युल इन्जेक्सन क्लिन इन्जिन टेक्नोलोजीले निकै उत्कृष्ट पावर जेनेरेट गर्छ। यसले सामान्य बाटोमा ४० किलोमिटरसम्म माइलेज दिन्छ। स्कुटरमा ब्लुटुथमार्फत फोन कनेक्ट गर्न सकिन्छ। मोबाइल कनेक्ट गरेर आफ्नो स्कुटर कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्लाम राख्न सकिन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा पनि कनेक्ट राख्न सक्छौं।
एसएक्सआर-१६० मा एन्टिलक ब्रेकिङ सिस्टम छ। १२ इन्चको अलोय ह्वीलले गर्दा स्कुटरलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हिलोमा वा गिटीमा स्कुटर चिप्लिने सम्भावना कम हुन्छ।
अप्रिलिया एसएक्सआर-१६० ले ७ हजार १ सय आरपिएममा ११ पिएस पावर र ५ हजार ७ सय ५० आरपिएममा ११ एनएम टर्क उत्पन्न गर्छ।
यसमा एकपटकमा ७ लिटर पेट्रोल जान्छ। अरू स्कुटरको तुलनामा टाढाको यात्रा तय गर्ने हो भने यो राम्रो विकल्प हुनसक्छ।
नेपालमा यो स्कुटर चार रङमा उपलब्ध छः रातो, सेतो, कालो र निलो।
कम्पनीले अप्रिलिया एसएक्सआर-१६० को सुरूआती बजार मूल्य चार लाख नौ हजार नौ सय रूपैयाँ तोकेको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २४, २०७८, १४:२३:००
टाटा व्यवसायीक गाडीका लागि 'शुभकामना सर्भिस क्याम्प' योजना
हिरो मोटोकर्पले बनायो दोस्रो गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड
दसैं तिहारमा हुन्डाइ हेवी इक्वुपमेन्ट किन्दा ५ लाखसम्म छुट
अटोमोबाइल ब्रान्ड चांगन आधुनिक शोरुमका साथ आउँदै